ဗာဂိုး ဂယ်လက်ဆီအုပ်စု (အင်္ဂလိပ်: Virgo Cluster) သည် ဂယ်လက်ဆီအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်း၏ဗဟိုသည် ဗာဂိုး ကြယ်စုတန်းနှင့်ဝေးရာမှ 53.8 ± 0.3 Mly (16.5 ± 0.1 Mpc) တွင်ရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်ဂယ်လက်ဆီ ၁၃၀၀ နီးပါးခန့် (၂၀၀၀ အထက်ဖြစ်နိုင်သည်) ပါဝင်သည်။ အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်သည်လည်း ပိုကြီးမားသော ဗာဂိုး မဟာဂယ်လက်ဆီအုပ်စု (Virgo Supercluster)၏ အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိကာ Local Group သည် အပြင်ဘက်ကျသော အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Virgo Cluster ၏ ထုထည်သည် နေစကြာဝဠာထုထည်ပေါင်း ၁.၂×၁ဝ၁၅ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဘဲဥပုံစံ Messier 87 ဂယ်လက်ဆီကဲ့သို့သော တောက်ပသည့် ဂယ်လက်ဆီပေါင်းများစွာအား ၁၇၇၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၇၈၀ အစောပိုင်းကာလများတွင် ရှာဖွေ့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Charles Messier သည် ကြယ်များမပါသော နက်ဗျူလာများအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ယင်းတို့၏ ပင်ကိုသဘာဝအမှန်ကိုမူ ၁၉၂၀ ခုနှစ်ထိ မသိခဲ့ပေ။ cluster ၏အဖွဲ့ဝင် ဂယ်လက်ဆီများစွာအား တယ်လီစကုပ်အသေးစားဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ အတောက်ပဆုံး အဖွဲ့ဝင်မှာ ဘဲဥပုံစံ Messier 49 ဖြစ်သည်။ သို့စေကာမူ အထင်ရှားဆုံးအဖွဲ့ဝင်မှာ ဘဲဥပုံစံ Messier 87 ဂယ်လက်ဆီဖြစ်သည်။ မတူညီသည်မှာ ယခင်တစ်ခုသည် အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိနေသည်။
Virgo Cluster သည် အဖွဲ့ဝင်ဂယ်လက်ဆီများကြားတွင် ပြန့်ကျဲသောအလင်းကို ပြနေသည်။ Messier 87 သည် အကြီးမားဆုံး ဂယ်လက်ဆီဖြစ်သည် (ဘယ်ဘက်အောက်)။
လေ့လာမှုဒေတာ (Epoch) J2000)
ဗာဂိုး ကြယ်စုတန်း၊ Coma Berenices
အခြားကြည့်ရန်: ဂယ်လက်ဆီ အုပ်စု၊ ဂယ်လက်ဆီ cluster၊ ဂယ်လက်ဆီ cluster စာရင်း
Cluster သည် M87 တွင် အလယ်ဗဟိုကျသော အခွဲတစ်ခုရှိသည်။ ယင်းအား Virgo A ဟုခေါ်ကာ ဒုတိယတစ်ခုမှာ M86 တွင် ဗဟိုပြုသည်။ ယင်းအား Virgo B ဟုခေါ်သည်။ Virgo cluster သည် Virgo Supercluster အတွင်းတည်ရှိပြီး ယင်း၏ ဒြပ်ဆွဲငင်အားသက်ရောက်မှုသည် အနီးအနားမှ ဂယ်လက်ဆီများကို နှေးကွေးစေသည်။ ယင်းတွင် ကြယ်တာရာကြားခံ ကြယ်များစွာကို တွေ့နိုင်သည်။ (cluster ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်)
Virgo Cluster မှ သိသာထင်ရှားသော ဂယ်လက်ဆီများ
Virgo Cluster ၏ ဂယ်လက်ဆီများ
အောက်ပါတို့သည် Virgo Cluster မှ သိသာထင်ရှားသော ဂယ်လက်ဆီများဖြစ်ကြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်တွင် ဂယ်လက်ဆီတစ်ခုအား ယူနစ်အခွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားမူရင်းတစ်ခုဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။)
ကော်လံ ၁: ဂယ်လက်ဆီနာမည်
ကော်လံ ၂: ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု epoch 2000
ကော်လံ ၃: ကျဆင်းမှု epoch 2000
Cကော်လံ ၄: ဂယ်လက်ဆီ၏ အပြာရောင် ပကတိအရွယ်အစား
ကော်လံ ၅: ဂယ်လက်ဆီအမျိုးအစား: E=ဘဲဥပုံစံ၊ S0=Lenticular, Sa,Sb,Sc,Sd=ခရုပတ်ပုံစံ၊ SBa,SBb,SBc,SBd=ခရုတ်ပတ်ပိတ်ပုံစံ၊ Sm,SBm,Irr=ပုံစံအတည်တကျမရှိ၊
ကော်လံ ၆: ဂယ်လက်ဆီ၏ ထောင့်ပြောင်းအချင်း
ကော်လံ ၇: ဂယ်လက်ဆီ၏ အချင်း (အလင်းနှစ်ထောင်ပေါင်း)
ကော်လံ ၈: ကော့စမစ် မိုက်ခရိုလှိုင်းနောက်ခံသို့နှိုင်းယှဉ်သော ဂယ်လက်ဆီ၏ အလျင် (km/s)
ကော်လံ ၉: ကယ်လက်ဆီတည်ရှိရာ cluster အခွဲ
ကိုဩဒိနိတ် (Epoch 2000)
NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for Virgo Cluster။ 2006-10-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mei, Simona (2007). "The ACS Virgo Cluster Survey. XIII. SBF Distance Catalog and the Three-dimensional Structure of the Virgo Cluster". The Astrophysical Journal 655 (1): 144–162. doi:10.1086/509598. Bibcode: 2007ApJ...655..144M.
See Virgo Cluster.
Following the entry for M91 in the Connoissance des Temps for 1784, Messier added the following note:
1 Boselli (2014). "The GALEX Ultraviolet Virgo Cluster Survey (GUViCS). IV. The role of the cluster environment on galaxy evolution". Astronomy & Astrophysics 570. doi:10.1051/0004-6361/201424419. Bibcode: 2014A&A...570A..69B. A69.
Ferguson, Henry C. (1998). "Detection of intergalactic red-giant-branch stars in the Virgo cluster". Nature 391 (6666): 461. doi:10.1038/35087. Bibcode: 1998Natur.391..461F.
Takamiya, Marianne (2009). "IGCs in the Virgo Cluster". Globular Clusters - Guides to Galaxies, Eso Astrophysics Symposia, Volume: 361. doi:10.1007/978-3-540-76961-3_83. Bibcode: 2009gcgg.book..361T.
Durrell, Patrick R. (2010). "Searching for Intracluster Globular Clusters in the Virgo Cluster". Bibcode: 2010AAS...21547814.
Lee, Myung Gyoon (2010). "Detection ofaLarge-Scale Structure of Intracluster Globular Clusters in the Virgo Cluster". Science 328 (5976): 334–. doi:10.1126/science.1186496. PMID 20223950. Bibcode: 2010Sci...328..334L.
Ferguson, Henry C.; Tanvir, Nial R.; von Hippel, Ted (1998). "Detection of intergalactic red-giant-branch stars in the Virgo cluster". Nature 391 (6666): 461. arXiv:astro-ph/9801228
Galaxy On Line Database Milano Network (GOLDMine)။ 2012-08-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Virgo Cluster။ 2013-04-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။